Ngathi-i-Hebei Kenuo Iimveliso zerabha ezinzileyo.
Iimveliso zerabha zeHebei Kenuo Co., Ltd.
yasekwa okokuqala ngo-1994, kunye nabasebenzi ezimbalwa ezingundoqo. kunye nophuhliso, oko wachitha kwinkampani morden today.The ikomkhulu ebhalisiweyo million 5 RMB, nto leyo ibekwe Xinle City Development Zone Economic kwaye ithatha indawo ka-26668 square metres, i Esona sakhiwo siphambili siquka ukwakha i-R & D, iofisi esebenza ngemiba emininzi, indawo yokusebenzela, imveliso yokugcina izinto, indawo yokugcina imveliso, igumbi lokuhambisa umbane, itanki lamanzi elijikelezayo, itanki lamanzi omlilo kunye nezinye izibonelelo ezincedisayo. Inkampani yethu inabantu abangama-118 bebonke, kubandakanya nabaphathi abaphezulu aba-5, iinjineli ezi-3 zophuhliso lwemveliso, amagcisa asixhenxe aphezulu, abasebenzi bemveliso abali-103 kunye nabanye. Inkampani ineqela lamasebe, inkqubo yolawulo esemgangathweni, ukuhamba komsebenzi ngokugqibeleleyo kunye nenkqubo elungileyo yenkonzo yabathengi, ebonelela ngesiqinisekiso esomeleleyo sophuhliso lwemveliso, imveliso, umgangatho, ukuthengisa kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa njl.
Elona shishini liphambili lenkampani yimveliso, ukuqhubekeka kunye nokuthengiswa kwemveliso yezihlangu, amasuntswana eplastiki, iimveliso zerabhaneemveliso zeplastiki. Imveliso yesikali, umgangatho ophezulu kunye nemveliso ekumgangatho ophezulu ayinako ukwahlulwa kwizixhobo ezigqwesileyo, kwaye irabha yeKenuo ityale imali eninzi kwintshayelelo kunye noyilo oluzimeleyo kunye nokwenziwa kwenani lemigca yemveliso. Inkampani ngoku ineeseti ezi-3 zemigca yemveliso ye-SJZ80 / 156 yohlobo lwe-resin tile kunye neeseti ezili-12 zemigca yokubumba yenaliti yeeplippers zeplastiki, ezinokufikelela kwimveliso yonyaka yeemitha zesikwere ezingama-75000 zephepha lesilicon elikhethekileyo le-photovoltaic, i-1.8 yezigidi zeemitha zesikwere I-resin tile, i-300 lamawaka eemitha zesikwereirabha eluhlaza kumgangathokunye nezigidi ezili-12 zeeplippers zeplastiki. Ixabiso imveliso yonyaka 266 yezigidi yuan.
I-resin tile eyenziweyo eyenziwe kwinkampani yethu ineempawu zokulwa ukuguga, ukulwa nomthwalo, ukuxhathisa ukubola, ukufudumeza ubushushu, ukudodobalisa umlilo, ukugquma, ukonga umbane kunye nokukhuselwa kwendalo, okusetyenziswe ngokubanzi kubunjineli beplati-to-slope, iindawo zokuhlala ezintsha ezisemaphandleni, iiholo kunye neendawo zokuhlala iindwendwe, ezitsala umdla kwisidala, indawo yokuhlala kunye negaraji, imboni kunye nezityalo zemigodi, iasidi kunye nealkali ukumelana nesityalo, ulwakhiwo lokhuselo lokonzakala kwetyuwa kunye nezinye iindawo, ezizinto ezifanelekileyo kuzo zonke iintlobo yesakhiwo esisigxina eluphahleni lokuhombisa kunye nokungena manzi. Ukuveliswa kweKenuoI-resin tile yokwenziwa ikhokelela kulungelelwaniso lolwakhiwo kumzi-mveliso wethayile, ophendula ngokupheleleyo kumgaqo-nkqubo welizwe wokhuselo lokusingqongileyo kwekhabhoni esezantsi kunye nokusekwa kombutho wolondolozo lwamandla.
Iimveliso zezihlangu eziveliswe yinkampani yethu ziboniswa kuyilo olwahlukileyo, isitayile esipheleleyo, umgangatho ozinzileyo, intuthuzelo kunye nobuhle, ukhuselo olusempilweni kunye nokusingqongileyo, ngoku ezine-EVA, i-PE, i-PVC, iplastiki, iirabha zeplastiki, iimbadada, iziliphu, izihlangu zolwandle , i-slipper, i-slippers, i-slippers yehotele, i-slippers, i-jelly shoes, i-slippers kunye ne-EVA. Inkampani ibhalisile uphawu lwe "Home Baby" kunye ne "Jianmeida", eziphucule ukubonakala kwemveliso kunye nexabiso lenkampani.
Ngo-Epreli ka-2014, inkampani yabhalisa yaza yasebenza eTaobao mall, eyonyusa amajelo entengiso, adityaniswa nabathengi ngokuthe ngqo, eziqonda ngokupheleleyo iimfuno zabathengi ngelixa beqonda umthamo wentengiso kunye nokuseka ubudlelwane obuhle babathengi. Inethiwekhi yokuthengisa yenkampani ikumaphondo angaphezu kwama-20 kunye noomasipala kunye nemimandla ezimeleyo kwilizwe liphela, kwaye iyonwabela igama eliphezulu kwimarike. Ngelixa uzinzisa imarike yasekhaya, ujonge ngokubonakalayo kwimakethi yamanye amazwe, ngoFebruwari 1, 2013, inkampani yafumana isatifikethi sobhaliso secandelo lokubhengezwa kwamasiko eRiphabliki yabantu emva kophicotho-zincwadi (ukubhaliswa kwamasiko okubhalisa: 1301965360); ngo-Okthobha u-2014, inkampani yethu yamkelwe njengelungu kwaye yafumana isatifikethi sobulungu yi-China Chamber of Commerce yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle kweLizwe ukuKhanya kweeMveliso kunye nezoBugcisa-bezandla (iSatifikethi esinguNombolo 03140021). Yenza ngamandla urhwebo lwangaphandle, ukuze iimveliso zeKenuo zikwazi ukuphuma ziye kwilizwe.
Umthengisi weBhodi ye-Asphalt eguqulweyo
Yintoni ekufuneka uyazi malunga nomgangatho wegumbi lokulala?
I-Fazhan Rd, iZowuni yoPhuhliso lwezoQoqosho kwiXinle County, eShijiazhuang City, eHebei Provence CHINA
Umnxeba: + 86-311-8858 0492